Limited Reopening - SKT International College
August 6, 2020 SKT International College
Dear valued parents and guardians,
This letter serves to inform you of the actions we are taking to ensure the health and safety of our students. However, due to the Covid-19 pandemic and for the safety of your loved ones, please note that our college will only open in stages. Asacollege, we have therefore implemented the following:-
Secondary students will physically attend college on 13 August. This applies to students from Years7-11 and IB students in Years 12 and 13.
KG and Primary Students
Students in our KG and Primary classes will continue to receive teaching ONLINE until, and including, Friday, 28 August.
Please note that due to the ongoing Covid-19 situation, these dates MAY be subject to change and this applies particularly to in-school teaching. You will be kept informed onavery regular basis.
For delays to physical in-school teaching and where teaching is implemented ONLINE, then discounts to the school fees for the next academic year will be applied.
I appreciate that this situation may cause some difficulties for you but we take the health and safety of your children and guardians, very seriously. If you have any concerns or require any further information, please do not hesitate to contact our college.
ဤအကြောင်းကြားစာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လူကြီးမင်းများအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ သား၊ သမီးများ၏ စိတ်ချလုံခြုံမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောလိပ်ကို အဆင့်များခွဲ၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ကောလိပ်တစ်ခု အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပါသည်။
အလယ်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် သြဂုတ်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသို့တက်ရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာသည် Year-12 နှင့် Year-13 ရှိ IB ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် Year-7-11 မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အတွက် သက်ဆိုင်ပါသည်။
KG နှင့် မူလတန်းကျောင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ KG နှင့် မူလတန်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် သြဂုတ်လ ၂၈ရက် သောကြာနေ့အထိ အွန်လိုင်းမှ သင်ကြားခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Covid-19 အခြေအနေကြောင့် ဤနေ့ရက်များသည် အပြောင်းအလဲများဖြစ်လာနိုင်ပြီး ကျောင်းတွင် သင်ကြားရေးများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သိရှိထားစေလိုပါသည်။ လူကြီးမင်းများကို ပုံမှန်အတိုင်း အမြဲအကြောင်းကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းတွင်းသင်ကြားခြင်းများနှင့် အွန်လိုင်းသင်ကြားခြင်း နှောင့်နှေးမှုများ အတွက် လာမည့်ပညာ သင်နှစ်၏ ကျောင်းလခများကို လျော့ချ၍ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအခြေအနေသည် လူကြီးမင်းများအတွက် အခက်အခဲအချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ ကလေးများနှင့် အုပ်ထိန်းသူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုများကို အလေးအနက်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းများမှာ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သတ်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကောလိပ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။
ဤအကွောငျးကွားစာသညျ ကြှနျုပျတို့ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူမြား၏ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဘေးကငျးလုံခွုံရေး အတှကျ ကြှနျုပျတျို့ လုပျဆောငျနသေညျ့လုပျဆောငျခကျြမြားကို လူကွီးမြားအား အသိပေးအကွောငျးကွားခွငျး ဖွဈပါသညျ။ သို့သျော Covid-19 ရောဂါကူးစကျခွငျးကွောငျ့ လူကွီးမငျးတျို့သား၊သမီးမြား၏ စိတျခလြုံခွုံမှုအတှကျ ကြှနျုပျတို့၏ကောလိပျကို အဆငျ့မြားခှဲ၍ ဖှငျ့လှဈမညျဖွဈကွောငျးကို အသိပေးအကွောငျးကွားအပျပါသညျ။ ကောလိပျတဈခုအနဖွေငျ့ ကြှနျုပျတို့သညျ အောကျပါအကွောငျးအရာမြားကို အကောငျအထညျဖျောခဲ့ပါသညျ။
အလယျတနျးကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားသညျ သွဂုတျလ (၁၃)ရကျနတှေ့ငျ ကြောငျးသို့တကျရောကျကွရမညျဖွဈပါသညျ။ ထိုအရာသညျ Year-12 နှငျ့ Year-13 ရှိ IB ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားနှငျ့ Year-7-11 မှ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား အတှကျ သကျဆိုငျပါသညျ။
KG နှငျ့ မူလတနျးကြောငျးမြား
ကြှနျုပျတို့၏ KG နှငျ့ မူလတနျးမှ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားသညျ သွဂုတျလ ၂၈ရကျ သောကွာနအေ့ထိ အှနျလိုငျးမှ သငျကွားခွငျးကို ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါသညျ။
Covid-19 အခွအေနကွေောငျ့ ဤနရေ့ကျမြားသညျ အပွောငျးအလဲမြားဖွဈလာနိုငျပွီး ကြောငျးတှငျ သငျကွားရေးမြားနှငျ့လညျး သကျဆိုငျကွောငျးကို ကြေးဇူးပွု၍ သိရှိထားစလေိုပါသညျ။ လူကွီးမငျးမြားကို ပုံမှနျအတိုငျး အမွဲအကွောငျးကွားပေးသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
ကြေောငျးတှငျးသငျကွားခွငျးမြားနှငျ့ အှနျလိုငျးသငျကွားခွငျး နှောငျ့နှေးမှုမြား အတှကျ လာမညျ့ပညာ သငျနှဈ၏ ကြောငျးလခမြားကို လြော့ခြ၍ကောကျခံသှားမညျဖွဈပါသညျ။
ဤအခွအေနသေညျ လူကွီးမငျးမြားအတှကျ အခကျအခဲအခြို့ကို ဖွဈပျေါစနေိုငျသျောလညျး ကြှနျုပျတို့သညျ လူကွီးမငျး၏ ကလေးမြားနှငျ့ အုပျထိနျးသူမြား၏ကနျြးမာရေးနှငျ့လုံခွုံမှုမြားကို အလေးအနကျထားသောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ လူကွီးမငျးမြားမှာ ဤအကွောငျးအရာနှငျ့ပတျသတျ၍ နောကျထပျအခကျြအလကျမြား သိရှိလိုပါက ကြှနျုပျတို့ကောလိပျကို ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျ ပါသညျ။
Welcome video for Academic Year ( 2020-2021)
A Big Congratulations to the MATHEMANIA 2019-2020 winners!!!
SKT International School Action Plan